एका ,एक चर्चामा आयो करण-फराह सम्बन्ध !!!!! – News Nepali Dainik
एका ,एक चर्चामा आयो करण-फराह सम्बन्ध !!!!!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ०२, २०७७ समय: ७:३१:०४
एजेन्सी । फराह खानले हिजो अर्थात् जनवरी ९, तारिखमा आफ्नो ५६ औं जन्मदिन मनाइन् । उनको जन्मदिनको अवसरमा उनीसँग, जोडिएको एउटा रोचक किस्साबारे जानकारी लिऔं । फराहले एकपटक फिल्म निर्माता तथा निर्देशक करण जोहरलाई विवाहका लागि प्रस्ताव गरेकी थिइन् तर करणले ‘प्राविधिक समस्या’ बताउँदै उनको प्रस्ताव अस्विकार ***गरिदिए ।
फराह खान र करण जोहरको दोस्ती लामो समयदेखिको हो । दुबैको २५, वर्षभन्दा बढी, समयदेखिको चिनजान छ । एक समय यस्तो पनि थियो जब फराह खान करण जोहरसँग विवाह गर्न चाहन्थिन् । साजिद खान र रितश देशमुख कार्यक्रम ‘यादों की बारात’ होस्ट गर्दथ । उक्त शोमा नै करणले फराहले उनलाई मन पराउने गरेको र उनलाई पट्याउनका लागि निकै कोसिस पनि गरेको बताएका थिए । यसमा फराह खानले पनि सहमति जताइन् ।
फराह खान फिल्म#### निर्देशक हुन् र उनले थुप्रै फिल्मको निर्देशन गरिसकेकी छिन् । फराह, हाल शिरिष कुन्दरसँग विवाहित छिन् र उनीहरुका तीन सन्तान छन् । उनीहरुको नाम दीया, अनाया र साइजर हो । अहिले फराह खान आफ्नै दुनियाँमा आफ्नो परिवार बच्चाहरुका साथमा खुशी छिन् भने करण, पनि अबिबाहीत नै रहेका छन् । उनी, पनि आफ्नै संसारमा खुशी छन् ।
Last Updated on: January 15th, 2021 at 7:31 am